रूसी भाषाको प्रस्ताव सरल र जटिल विभाजित छन्। आफ्नो फरक सरल जटिल मा एक व्याकरण आधार दुई वा बढी हुन सक्छ भन्ने छ। धेरै भागहरु को निर्वाचकगण को syntactic निर्माण, संचार को तीन प्रकार को एक प्रयोग गर्न सकिँदैन: समन्वयात्मक, वा conjunctionless subordinative। संग जटिल वाक्य अधीनस्थ adverbial (ग्रेड 9) - मुख्य को निर्भर भाग को राशि को व्यापक विषय।
एक जटिल वाक्यको अवधारणा
एक भाग अर्को निर्भर छ जसमा विन्यास, कम्पाउन्ड भनिन्छ। यसलाई सधैं मुख्य छ र सहायक भाग (जो प्रश्न बाट)। प्रस्ताव यस्तो संरचना को भाग जडान गर्दै छन् subordinative वा शब्दहरू संबद्ध, उदाहरणका लागि:
(- बुझे केटा, adventitious subordinating को 'के' संघ हालतमा संलग्न छ जो मुख्य भाग) केटा (? के) आफ्नो छलछाम प्रकट भएको थियो त्यो थाह थियो।
(- राम्रो प्रान्तमा पहिलो हुन - मुख्य प्रस्ताव "" एक निर्भर संघ संग जोडिएको) रोममा दोस्रो हुन भन्दा, यो प्रान्तमा पहिलो हुन राम्रो छ (के अवस्थामा?)।
सबै buttoned ज्याकेट गरे कुन उत्तरी हावा blows (? के) देखि (मुख्य प्रस्ताव - उत्तरी हावा बाट उडायो - यो मित्र अधीनस्थ शब्द जोडिएको छ "जो")।
जो जटिल वाक्यको हालतमा जडित मा, आधार, तिनीहरूले4प्रकार मा विभाजित छन्:
संग izjasnitelnyh अधीनस्थ कि गर्न यूनियन प्रयोग भने (म गेट को चरचर सुन्न सक्छ);
attributive क्लाज, केही कुनै कारणको लागि एकजुट भएको समुह शब्दहरू संलग्न छन् जो संग जो, जसको, के, कहाँ र अरूलाई (म को लामो सपना देख्यो थियो जो कार, किनेको);
शब्दहरू संग संबद्ध जडान अधीनस्थ संग किन, किन र के किन, (को साँझमा आमाले उनको छोरा स्नान थियो, त्यसपछि उसलाई एउटा कथा पढ्नुहोस्);
अधीनस्थ adverbial संग जटिल वाक्य (हामी अवलोकन, जहाँ शहर सबैभन्दा देखिने भएको छ सम्म गए)।
syntactic संरचना अन्तिम प्रकार आफ्नो महत्त्व अनुसार प्रकार मा विभाजित छन्।
प्रकार paranasal adverbial
जटिल वाक्य निर्भर भाग, परिस्थिति मा निहित प्रश्नहरूको जवाफ मा, भनिन्छ। तल अधीनस्थ adverbial संग जटिल वाक्य हो। तालिका संक्षिप्त सबै प्रकारहरू पठाउँछ:
बित्तिकै पर्दा गुलाब को रूप मा, अर्केस्ट्रा खेल्न थाले (जब?)
तिनीहरूले एक तातो खाना र एक वार्मिंग grog लागि प्रतीक्षा थिए जहाँ तिनीहरूले, घर आए (कहाँ?)
कुकुर आफ्नो हिंद खुट्टा मा उभिएर किनभने छोराछोरीलाई हाँसिन् (किन?), र उनको पुच्छर kutsym wagged
नजिकैको आफैलाई पाउन भने, (के अवस्थामा?) हामीलाई कल कृपया
म पसलमा गए (के अन्त गर्न?) खाने को लागि रोटी किन्न
उहाँले अर्को ठेस बलियो थियो भन्ने तथ्यलाई बावजुद, केही (विरुद्ध के?) भने
बाहिर कुरा thundered (के जस्तै?), यदि टाढा आधिबेरी रूपमा
कार्य को मोड
हामी सबै गरे (कसरी?), टिप्पणी मा संकेत रूपमा
उपाय र डिग्री
केटीले पहिलो पराई कुरा थियो कहिल्यै, (कुन हदसम्म?) यति लजालु थियो
Yegor को गर्मी भन्दा वृद्धि, त्यसैले अब यो बाँध्न मा दोस्रो सब छ (कि फलतः?)
अधीनस्थ adverbial संग जटिल वाक्य तिनीहरूले परिभाषित कि मूल्य आधारमा यूनियन र संबद्ध शब्दहरू सामेल।
Adventitious छवि र कार्य को डिग्री
को निर्भर भाग मा जटिल वाक्य यस प्रकार कसरी कार्य गर्न एक विवरण दिन्छ वा मुख्य छलफल भइरहेको छ जो वस्तु ट्याग, गुणस्तर को डिग्री संकेत गर्छ।
को प्रस्ताव गर्न अधीनस्थ यी syntactic संरचना प्रश्न उठ्छ: "कसरी?", "कसरी?", "कसरी?", अनि अरूलाई "कुन हदसम्म?"। निर्भर भाग भन्छिन्:
शब्द संग "किनभने" मुख्य दफा मा क्रिया संग (उत्तरी रोशनी कसैले आकाश मा एक हजार रंग मोमबत्ती रोशनी थियो जस्तै यो (तरिका जस्तै shimmered),?);
शब्द संग पूर्ण विशेषण "यो" (द साँझ थियो यस्तो अद्भुत (कुन हदसम्म), कुनै एक stuffy कोठा फिर्ता आउन चाहन्थे कि?);
को संज्ञा र शब्द संग पूर्ण विशेषण "यो" (एक अनौठो छाप (कुन हदसम्म, सिर्जना?) तिनीहरूले धेरै वर्ष को लागि ज्ञात थियो भने)।
तरिका को अधीनस्थ adverbial संग जटिल वाक्य सधैं निर्माण त एक निर्भर अगाडि खडा छ को मुख्य भाग भनेर। तपाईंले तिनीहरूलाई स्वाप भने, त्यसपछि एउटा फरक मूल्य। उदाहरणका लागि:
बरफ (कुन हदसम्म?) यति उज्यालो थियो मेरो आँखा सडक गर्न जोखिम केही मिनेट पछि आंसू गर्न थाले।
आँखा पानी सडक गर्न जोखिम केही मिनेट पछि सुरु (किन?), किनभने हिउँ त उज्ज्वल थियो।
जब मा निर्भर भाग जटिल विन्यास गर्दा घटना, समय को अधीनस्थ adverbial यो जटिल वाक्य संकेत गर्छ। एकै समयमा निर्भर भाग एक अवधारणा उल्लेख छैन, र सबै मुख्य गर्न, र प्रश्नहरू "जब?", "कति लामो?", "कति लामो?" "भएकोले गर्दा?" जवाफ प्रदान
तिनीहरूले अस्थायी साँठगाँठ "जहाँ", "जब", "लगभग", "सम्म", "सम्म", "पछि" र अरूलाई जोडिएको छन्। जब यो अनिवार्य वाक्य "पछि" एक समय मान, जस्तै "भने" भएको एउटा शब्द, "लामो", आदि हुन सक्छ उदाहरणका लागि, साहित्य देखि adventitious adverbial संग जटिल वाक्य .:
त्यो दिन मा (जब?) म काँध (आर्थर कनन डयल) मलाई हिट मापदण्ड कसैले पल्ट निर्णय गरे जब।
र अब एक सानो यहाँ बस्न (कसरी लामो?), म खान (जे Simenon) चलाउन बेला।
यस्तै syntactic निर्माण मा दुई भागमा विभाजित अल्पविराम कि जटिल साँठगाँठ प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस मामला, तिनीहरूलाई को एक एक सूचकांक शब्द रूपमा मुख्य खण्डमा स्थित, र दोस्रो - संघ मा एक अधीनस्थ दफा को रूप मा (30 वर्ष पहिले नै पारित उहाँले आफ्नो पैतृक शहर बायाँ देखि)।
घटना मा इशारा शब्द छुटेको छ कि, निर्भर भाग पहिले र मुख्य पछि दुवै हुन सक्छ, तर दुई अवस्थामा यसलाई स्थिर छ:
यदि अधीनस्थ adverbial प्रयोग साँठगाँठ संग जटिल वाक्य "कसरी", तिनीहरू "अचानक जब," मुख्य (लन्च पहिले नै उहाँले अर्को अतिथि आउँदा अन्त, थियो) पछि।
तपाईं रूपमा बित्तिकै, जस्तै "जब ... त्यसपछि" रूपमा डबल यूनियन, प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने "... ',' ... जब। केही। " यस मामला मा, मुख्य दफा एक भाग हो, र डबल संघ को दोस्रो खण्ड यसरी हटाइएका गर्न सकिन्छ अगाडि (पहिलो हिउँ खस्दा, प्याक दक्षिण उत्प्रेरित गर्नेछ)।
अन्य अवस्थामा, को अधीनस्थ स्थान वाक्यको अर्थ प्रभावित बिना परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।
चौडी अधीनस्थ (तल उदाहरणहरू) संग जटिल वाक्य एक दृश्य वा यसको दिशा संकेत हुन सक्छ। यो प्रश्नको जवाफ "कहाँ?", "कहाँ?", जो एक क्रियाविशेषण (त्यहाँ, त्यहाँ, त्यहाँ सबैतिर, जताततै र अरूलाई) द्वारा व्यक्त गर्न सकिन्छ मुख्य भाग मा एक विशेष शब्द, बुझाउँछ "कसरी?" अनि।
जताततै (कहाँ?), कहाँ फेंक नजर, पानी थियो।
म त्यहाँ बाट (कहाँ?), कहिल्यै ज्ञात थियो कुन गरिबी आउनुहोस्।
अधीनस्थ adverbial ठाउँ संबद्ध शब्दहरू समान syntactic निर्माण मा "कहाँ?", "कहाँ?", "कहाँ?" निर्भर भागहरु लिङ्क जटिल वाक्य शब्द यसलाई पछि खडा।
अधीनस्थ adverbial अवस्था संग जटिल वाक्य प्रश्नहरूको जवाफ दिन "के अवस्थामा?", "कुन तरिकामा?" यस्तो विन्यास मुख्य भाग मा उल्लेख कुनै पनि काम गर्न, जो अन्तर्गत अवस्था संकेत गर्छ। तिनीहरूले निर्भर वाक्य "भने", "खम्बा" र (मा "जब", एक मुख्य भाग र एक अलग predicate रूपमा उपचार गर्न सकिन्छ, र "यदि" यूनियन "कसरी" (को "यदि" को परिभाषा) सहभागी छन् को "यदि" को भूमिका)।
चौडी अधीनस्थ (पुष्टि तल उदाहरण) संग जटिल वाक्य कसरी मास्टर को मामला मा हुन, र यो पछि हुन सक्छ:
Kohl तपाईँलाई चाहनुहुन्छ, त्यसैले यसलाई हुन के (के अवस्था मा?)।
तपाईं नियमित टिकट किन्न भने तिमी, लटरी जीत एक मौका प्राप्त गर्न सक्छन् (कुनै पनि मामला मा?)।
तपाईं नियमित रूपमा टिकट किन्न भने, तपाईं लटरी (प्रस्ताव अपरिवर्तित सामग्रीहरू को क्रमवय) जित्न सक्छौं।
अक्सर यी विन्यास, प्रयोग यूनियन दुई भागहरु को निर्वाचकगण: को "... त", "यदि .... त्यसैले "," यदि .... त्यसपछि "(यो भोलि वर्षा हुनेछ भने, हामी माथि मशरूम जानेछ)।
उद्देश्य को अधीनस्थ क्लाज संग जटिल वाक्य कार्य मुख्य भाग मा संकेत ठाउँ लिन्छ जसको लागि उद्देश्य संकेत गर्छ। तिनीहरूले प्रश्न "किन?", "के उद्देश्य?", "किन?" जवाफ प्रदान
भागहरु समान विन्यास यूनियन, "गर्न", "यदि मात्र", र अरु, उदाहरणका लागि सामेल "गर्न", "गर्न", "गर्न त":
छिटो हिंड्न, आफ्नो गति quickened (के अन्त गर्न?)।
अर्डर मानिसहरूलाई उपयोगी हुन, तपाईंले आफूलाई काम धेरै आवश्यक (के को लागि?)।
म (किन?) यो मेरो बुबा परेशान गर्न भन्नुभयो।
यदि तिनीहरू बीच अल्पविराम छ परिष्कृत यूनियन, विभाजित हुन सक्छ। एक भाग मुख्य दफा र "गर्न" संघ छ - आधारमा।
अधीनस्थ adverbial कारण संग जटिल वाक्य मुख्य भाग मा भने के को आधारमा संकेत गर्छ। निर्भर प्रस्ताव पूर्ण मुख्य लागू र प्रश्न "किन?", "किन?", "किन?" जवाफ अनि यूनियन मिलती "किनभने," "राम्रो" "किनभने," "देखि" "किनभने "र अरूलाई, उदाहरणका लागि:
हामी जुटे किनभने प्रतिद्वन्द्वी हामीलाई (किन?) पिटे सकेन।
कि शरद ऋतु वर्षा र चिसो ल्याएको छ किनभने यो दुःखी थियो (किन?)।
हामी (किन?), किनभने यो छ घण्टा गए एक विराम गर्न निर्णय गरे।
यस्तै syntactic निर्माण मा खण्ड सामान्यतया मुख्य पछि खडा।
यस्तै adventitious संग जटिल वाक्य मा कोर सामग्रीमा बनेको छ जो एक उत्पादन, संकेत गर्छ। यो प्रश्नको जवाफ "किनभने यो के भयो?" निर्भर खण्ड मुख्य संघ "त के" र सधैं उदाहरणका लागि, यो पछि जान्छ संलग्न छ:
गर्मी बढ्यो (किनभने यो के भयो?), त्यसैले हामी आश्रय खोज्न थियो।
केटी रुन (किनभने यो के भयो?) थाले, त्यसैले हामी उनको अनुरोध परित्याग थियो।
अधीनस्थ डिग्री र क्रियाविशेषण "राम्रो" र संयोजन "कि" प्रयोग उपाय संग निर्माण को यस प्रकार भ्रममा छैन (को गर्मी भन्दा उसले tanned, आफ्नो कपाल सेतो थियो)।
यी क्लाज संग जटिल वाक्य ठाउँ लिएका छन् कि घटनाहरू, मुख्य भाग छलफल भएको थियो को विपरीत को व्याख्या दिन।
तिनीहरूले "भनेर बावजुद?", प्रश्नहरूको जवाफ, मुख्य भागमा अनि संलग्न "के विपरीत?":
"मा" यूनियन, "पनि ... तर", "गरौं" "गरौं", "भन्ने तथ्यलाई बावजुद" (सडक मा वर्षा थी हुनत त्यहाँ ठूलो puddles थिए);
शब्दहरू "कुनै" कण संग मित्र - "कुनै कुरा कसरी", "कुनै कुरा कसरी" "कुनै पनि" (जतिसुकै धेरै आफ्नो हजुरबुबा एक कुर्सी बनाउने थियो - एक rocking कुर्सी, उहाँले छ बाहिर lopsided आए)।
तसर्थ, जिम्मेवारी क्लाज संकेत सञ्चालन किन काम गरेन।
सर्दी लागि लोक उपचार
Windows XP लगभग 20 मजा तथ्य
Zhan डी ला Fontaine: जीवनी, tvtorchestvo
अपरेसन पछि सास प्रक्रिया गर्न भन्दा? प्रत्येक दिनका लागि सुझावहरू